सामुदायिक विद्यालयप्रति आम अभिभावकले हेर्ने दृष्टिकोण अझै पनि संकीर्ण नै देखिन्छ । गुणस्तर नभएर नै हो कि अन्य कारण छन् ?
प्रमुख कारण त गुणस्तर नभएरै हो । तर, अरु कारण पनि छन् । शिक्षाको लागि उचित भौतिक तथा शैक्षिक संरचनाको अभाव छ । धेरै शिक्षकहरूमा नैतिक तथा पेसागत मर्यादाको कमी देखिन्छ । शिक्षक तथा विद्यार्थीको राजनीतिक संलग्नताले पनि सामुदायिक विद्यालयको पठनपाठन प्रभावित हुने गरेको छ । शिक्षा निःशुल्क भइदिनाले व्यक्तिको प्रतिष्ठासँग जोडिन नसक्नु पनि अर्को कारण हो ।
गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षाका लागि बूढानीलकण्ठ स्कुल अब्बल रहँदै आएको छ । कसरी सम्भव भएको छ गुणस्तर कायम गर्न ?
गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षाका लागि पर्याप्त भौतिक संरचना र गुणस्तरीय शैक्षिक सामग्रीको आवश्यकता पर्छ । विद्यार्थीलाई भय, चिन्ता र भेदभाव मुक्त वातावरण चाहिन्छ । विभिन्न किसिमका नकारात्मक सामाजिक गतिविधिबाट पनि विद्यार्थीहरूलाई टाढा राख्नुपर्ने हुन्छ । यसले विद्यार्थीलाई पढाइमा एकाग्र बन्न सहयोग पुग्छ । त्यसैले एकाग्र भएर शैक्षिक गतिविधिमा मात्रै केन्द्रित हुने वातावरण विद्यार्थीलाई चाहिन्छ । त्यसैगरी शिक्षण पेसा र विद्यार्थीप्रति समर्पित दक्ष तथा प्रेरणादायी शिक्षकहरू पनि गुणस्तरीय शिक्षाका लागि अनिवार्य आवश्यकता हो ।
यी सबै कुरा बूढानीलकण्ठ स्कुलका विद्यार्थीलाई उपलब्ध छ । यसका अलावा बूढानीलकण्ठ स्कुलमा किताबी ज्ञानलाई भन्दा पनि विद्यार्थीका जिज्ञासालाई बढी ध्यान दिइन्छ, बुझाइलाई जोड दिइन्छ । निरन्तर मूल्याङ्कन र पृष्ठपोषणमा जोड दिइन्छ, खेलकुद तथा अतिरिक्त क्रियाकलापमा जोड दिइन्छ । यसका साथै समाजसेवा, सामूहिक गतिविधि तथा स्वावलम्बन प्रवद्र्धन गर्ने क्रियाकलापमा सम्मिलित हुन विद्यार्थीलाई प्रोत्साहन गरिन्छ ।
यहाँ विद्यार्थीले कुनै पनि बेला साथीबाट, अग्रजबाट, शिक्षकबाट वा प्राविधिक शैक्षिक श्रोतहरूबाट सिक्न पाउँछन् । यी सबै अवयवको समिश्रणबाट नै शिक्षामा गुणस्तर कायम गर्न बूढानीलकण्ठ स्कुल सफल भएको हो ।
यसलाई कायमै राख्न पनि कम चुनौतीपूर्ण छैन । यसका लागि शिक्षक तथा कर्मचारीको समर्पण र व्यवस्थापनले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । साथै सम्वेदनशील विषयमा अपनाइएको निष्पक्षता तथा ‘नो कम्प्रोमाइज’को अवधारणा पनि सफलताको कारण हो ।
बूढानीलकण्ठका उत्पादनले कुन कुन क्षेत्रमा कस्तो सफलता हासिल गरिरहेका छन् ?
बूढानीलकण्ठ स्कुलले प्रविधिलाई उपयोग गर्न सक्षम, दक्ष, सचेत, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि अब्बल कहलिन सक्ने, वैयक्तिक भिन्नता बाहेक कुनै पनि विभेदमा विश्वास नगर्ने, निष्ठावान, स्वावलम्वी तथा कर्तव्यनिष्ठ तथा चरित्रवान जनशक्ति उत्पादन गर्दै आइरहेको छ । थुप्रै उद्यमी, वैज्ञानिक, दक्ष शिक्षक, प्राविधिक, व्यावसायी तथा प्राज्ञ बूढानीलकण्ठ स्कुलबाट उत्पादन भएका छन् ।
जुन क्षेत्रमा गएका भए पनि लगनशिलता, सिर्जनशिलता, विश्वासनियता र इमान्दारी उनीहरूको पहिचान हो । प्रायःले आफ्नो क्षेत्रमा नेतृत्व नै लिइरहेका छन् । गुगल, माइक्रोसफ्ट, अमेजन, एप्पल कम्प्युटरजस्ता कम्पनीमा महत्वपूर्ण प्रविधिकका रुपमा बूढानीलकण्ठ स्कुलका भूतपूर्व विद्यार्थीहरू कार्यरत छन् । विश्व बैंक, गोल्डम्यान स्याक, एडीबीजस्ता ख्यातिप्राप्त संस्थाहरूका महत्वपूर्ण ओहोदामा पनि बूढानीलकण्ठका उत्पादन छन् ।
त्यसैगरी क्यान्सर र क्षयरोगको बारेमा सबैभन्दा नौलो अन्वेषक बन्न सफल हुनुका साथै नेपालको प्रथम भूउपग्रह बनाउने वैज्ञानिक पनि हाम्रै विद्यार्थी बनेका छन् । बुद्ध एयर, मनकमना केवुलकार, भाएनेट, डिसहोम टिभी, क्यूएफएक्स जस्ता संस्था सञ्चालन गर्ने सफल उद्यमी, ख्याति प्राप्त डाक्टर, इन्जिनियर, शिक्षक, विद्यालय सञ्चालक, उद्योगपतिदेखि राष्ट्रिय स्तरका योजनाकार, नेता तथा मन्त्रीसम्म बनेर देशको सेवा गरिरहेका छन् ।
मुलुक संघीयतामा गएपछि शिक्षाको क्षेत्रमा पनि नीतिगत परिवर्तनहरू भएका छन् । संघीयतापछिको शिक्षा नीतिलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ? सुधारका पक्षहरू के के छन् ?
थुप्रै आशाजनक नीतिहरू तयार गरिँदैछन्, प्रतिबद्धता जाहेर भएका छन् । गुणस्तरीय जनशक्तिलाई मात्र शिक्षण पेसामा भित्र्याउने, शिक्षक पेसालाई मर्यादित बनाउने, विद्यालयलाई राजनीतिबाट मुक्त गर्ने, शिक्षकले राजनीति गर्न नपाउने आदि सकारात्मक कुराहरू छन् । प्रधानाध्यापकलाई करारमा लाने र शक्ति सम्पन्न बनाउने, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सट्टा विकास समिति बनाउने, सार्वजनिक शिक्षामा थप लगानी गर्ने, निजी विद्यालयलाई सेवामूलक बन्न प्रोत्साहन गर्ने, सिपमूलक र प्राविधिक शिक्षामा जोड दिनेजस्ता थुप्रै लोकप्रिय नीतिहरू अघि सारिएको छ । यद्यपि, केही अति नै सैद्धान्तिक र अव्यवहारिक नीतिहरू पनि छन् । तिनलाई भने सुधार्नुपर्छ ।
नेपालमा विद्यालय शिक्षाको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ ?
आशलाग्दो छ तर नीतिलाई व्यवहारमा उतार्ने बेलामा सरोकारवाला सबैको प्रतिबद्धता आवश्यक हुन्छ । सरकारमात्र नभई सर्वसाधारण सबैले व्यक्तिगत स्वार्थबाट माथि उठेर आ–आफ्नो भूमिका जिम्मेवारीपूर्वक निभाएको खण्डमा नेपालको विद्यालय शिक्षाको स्तर सजिलै माथि उठ्छ । आशावादी हुने आधारहरू छन् ।
यसका लागि केकस्ता चुनौतीहरू छन् ?
नीतिलाई व्यवहारमा उतार्नु नै प्रमुख चुनौती हो । नीतिलाई कार्यान्वयन गराउनको सट्टा आ–आफ्ना क्षणिक स्वार्थका लागि नीति नै फेरिदिने, राम्रो भन्दा पनि हाम्रोलाई काखी च्याप्ने, कुनै पनि नैतिक जिम्मेवारी नलिने, जस्तोसुकै बैथितिलाई पनि सहजै स्विकार्ने हामी जनताको मानसिकतामा परिवर्तन गरी सबैमा सरकारका राम्रा शैक्षिक नीतिलाई सफल बनाउन ऐक्यबद्धता सृजना गर्नु अर्को ठूलो चुनौती हो । हिजोका गलत निर्णयका परिणामस्वरुप हात लागेका विद्यमान उल्झनहरूलाई व्यवस्थित गरी नयाँ नीतिलाई कार्यान्वयन गराउन आवश्यक वातावरण सृजना गर्नु पनि ठूलो चुनौती हो ।